कलाकार राज घिमिरे भन्छन्– आजसम्म गोदावरीकै हितको निम्ति काम गरें, भोली पनि यही गर्छु - Everest Dainik - News from Nepal
कलाकार राज घिमिरे भन्छन्– आजसम्म गोदावरीकै हितको निम्ति काम गरें, भोली पनि यही गर्छु
नायक राज घिमिरे पछिल्लो समय गोदावरी क्षेत्रमा सामाजिक कार्यमा व्यस्त छन् । लामो समय सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहँदै आएका उनी यसपटक वडाध्यक्ष बन्ने दौडमा छन् । आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी गोदावरी नगरपालिका– ३ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । सामाजिक र चुनावी विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर उनीसँग रामहरि कार्कीले गरिएको कुराकानी ः
कलाकारितामा सफल बन्न सक्ने सम्भावना छाडेर तपाईंलाई राजनीतिमा आउने हुटहुटी कसरी जाग्यो ?
मानिस सामाजिक प्राणी हो । जुनसुकै क्षेत्रको मानिस पनि सामाजिक हुनुपर्छ । म कलाकारितामै टिकिरहेको भएपनि आज सामाजिक क्षेत्रमा यस्तै थुप्रैै काम गर्थेंं । तर कलाकारिता बाहेक मलाई राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने पनि रुची थियो । म कलाकारितामा छँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा सरिक थिएँ । यद्यपी कलाकारिता पनि मेरो रुचीको विषय हो । तर त्यो भन्दा पनि बढी मलाई सामाजिक क्षेत्रमा केहि गर्ने भित्रैदेखि हुटहुटी थियो । सामाजिक र राजनीतिक एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै लागेर मैले राजनीतिलाई अलि मन पराएँ । अहिले त राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुने बानी नै परिसकेको छ ।
चलचित्र वा कलाकारिता गर्दागर्दै पनि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय बन्नेहरु पनि छन् नि ?
उदाहरण त छन् । तर त्यसरी लाग्दा यता न उता भइन्छ । कतै पनि राम्ररी आफ्नो प्रस्तुती देखाउँन पाइँदैन । छु भन्नलाई मात्रै हुन्छ । क्षेत्रकारण एउटा क्षेत्रलाई मुलधारमा राखेर काम गर्दा बढी समय दिन पाइन्छ । अर्कोकुरा, राजनीतिक हिसाबमा भन्दा मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि ‘कम्युुनिस्ट’ हो । मलाई त्यसको प्रभाव सानैदेखि ममा परेको थियो । चलचित्रबाट सामाजिक काम गर्न नसकेजस्तो लागेर नै मैलै चलचित्र क्षेत्र छाडेको हुँ । अनि म राजनीतिमा सक्रिय भएको हुुँ ।
राजनीतिक बाहेक कलाकारिता क्षेत्र पनि तपाईको पृष्ठभूमि हो, एउटा कलाकारर जनप्रतिनिधि चुनिनको लागि उम्मेदवार बन्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ?
म काम पनि गर्नुपर्छ र त्यो व्यक्ति त्यसको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा म पनि पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । म जनप्रतिनिधि भएपनि समाजमै काम गर्ने हो । सेवा गर्ने हो । नभएपनि म गोदावरी क्षेत्रका स्थानीयको सेवामा लाग्ने हो । हाल गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवार बनेको छु । मेयरका लागि पनि मेरो नाम सिफारिस भएको थियो । गठबन्धनको भागबण्डमा गोदावरी नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पद परेन । तर पनि स्थानीयवासीको सल्लाहअनुुसार वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेको छु ।
वडाध्यक्षमा विजयी हुन सक्ने आधारहरु केके छन् तपाईसँग ?
प्रशस्त आधार छन् । म गोदावरी क्षेत्रमै लामो समय सामाजिक क्षेत्रका काम गरिराखेको छु । यो नै मेरो मुख्य आधार हो । आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छाडेर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न थालेको एक दशक भन्दा धेरै भयो । मैले समाजका व्यक्तिको लागि राम्रो गरेको रहेछु भने उहाँहरुले मुल्यांकन गरेर जिताउनु हुन्छ । यो मेरो आशा र दाबी पनि हो । मलाई लाग्छ, मेरो जित सुुनिश्चित छ । स्थानीयवासीको साथ र सहयोगले मलाई उत्साहित बनाएको छ । सबैले यो सुुन्दर स्थानको विकास र उज्ज्वल भविष्यका लागि राजले नेतृत्व गर्नुुपर्छ भनिरहनु भएको छ ।
के के काम गर्नु भयो ?
गोदावरी क्षेत्रमा सोलार बत्ती बाल्ने, सडक बनाउन पहल गर्ने, स्थानीयलाई प्रशासनिक कार्यमा झन्झट भएको थाहा पाए तुरुन्त गएर काम छिटो सकाउने पहल गरिदिने, बन्द सडक खुलाउन पहल गर्ने, किसानका समस्या हल गर्न पहल गर्ने, उपचार गर्न नसक्नेलाई आर्थिक सहयोग गर्नेलगायत थुप्रै कार्य गरेको छु । मेरो निजी गाडिलाई एम्बुलेन्सको रुपमा प्रयोग गरेको छु । कोरोना संक्रमण र भुकम्पको बेलामा पनि यस क्षेत्रमा म निकै खटिए । खान नपुग्नेलाई खाद्यान्न बाडें । उपचार गर्न नसक्नेलाई उपचारको वातावरण मिलाएँ । यसबाहेक अन्य धेरै कामहरु छन् ।
गोदावरी क्षेत्रलाई सुुन्दर, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने योजना केके छन् ?
अब गोदावरीलाई पर्यटनलक्षित योजनाले नै सम्पन्न पार्न सकिन्छ । यहाँका धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक क्षेत्रलाई पर्यटन भित्र्याउने उद्गमस्थलका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यदी म वडाध्यक्ष भएँ भने मैले गोदावरीलाई चम्काउँछु । म काममा विश्वास गर्छु त्यसैले गर्न नसक्ने आशा बाड्दिनँ । सकुञ्जेल गोदावरी क्षेत्रकै हित र विकासको लागि लागिपर्छु ।
यसोभए अब चलचित्र क्षेत्रमा फर्कनु हुन्न ?
केहि चलचित्रमा निर्माण गरेपनि त्यही क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दिनँ । मैले सामाजिक काम गर्ने क्रममा थुप्रै कथा व्यथाहरु देखे भोगेको छु तीनलाई कलाकारितामा प्रयोग गर्ने मन पनि छ । मैले यसअघि नै राज प्रोडक्सन पनि स्थापना गरिसकेको छु । यसबाटै मैले अभिनयसँगै चलचित्र निर्माण गर्ने सोच बनाएको छु ।
तपाई विहानैदेखि रातीसम्म सामाजिक कार्यमा खट्नु हुन्छु, थकान र दिक्क लाग्दैन ?
म निकै भारी बोक्न चाहने मान्छे हुुँ । कोदाली खन्दाखन्दै हिरो भएँ । अचेल सामाजिक कार्यमा खटिने बानी नै परेको छ । किनकी यो कार्यमा लागेको धेरै समय पनि भयो । कुनै नियम वा कामलाई बानीमा परिणत गरेपछि सहज हुने रहेछ ।
तपाईलाई स्थानीयवासीले भोट दिने आधारहरु के के छन् ?
मुख्य कुरा त म गोदावरीमै जन्मे हुुर्केको मान्छे हुँ । आजसम्म पनि यो ठाउँकै लागि गरेको हु र भोली पनि यो ठाउँकै लागि केहि गर्ने सपना बोकेको छु । गोदावरीलाई उचाइमा पुु¥याउने मेरो अबको सपना छ । मैले सामाजिक रूपमा पनि यो ठाउँमा धेरै काम गरेको छुु । कोरोनाको समय, भूकम्पका समय, १२ वर्षे गोदावरी मेलालगायतमा समयमा निकै खटिएँ । त्यसैले मलाई स्थानीय नागरिकको साथ र सहयोग मिलेको छ र मिल्नेछ भन्ने आशा राखिराखेको छु ।
तपाईको अनुभवमा कलाकर्मी र राजनीतिकर्मीमा के बन्न सजिलो रहेछ ?
राजनीति र कला दुुवै क्षेत्रमा रुचि भएकाले म दुुवै क्षेत्रमा रमाएको छुु । मलाई कला र राजनीति परिपूरक हुन् जस्ता लाग्छ ।